အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: မှတ်တိုင် အမှတ် - ၃၅
Posted by Pyiet Oo Aung at 2:29 AM
အခုလို ငါ့ညီလေး က ကိုယ့်အတွက် မွေးနေ့ အမှတ်တရ ရေးဖွဲ့ပေးတဲ့ အတွက် အရမ်း ဝမ်းသာပါတယ် ကွာ...။
YOUR EXPRESSIONS ARE SO ARTISTIC & PERSUASIVE.......
MADE ME WANNA " SMOKE "
~ YOU R MY ROCK ~
မှတ်တိုင် ၃၅ မှာ နတ်သမီးကို မီးရှို့ကြတယ်ပေါ့ စာရေးဆရာရော ဇာတ်လိုက်ရော တရားစွဲမယ် စာရေးဆရာ ဒီလို violent စာတွေမရေးပါနဲ့ အကိုကြီးကိုလင်းထက် မွန့်အိမ်ကို လှသထက်လှအောင်ဆောက်ပေးသဖြင့် အလုပ်ကြမ်းနှင့် အိမ်ထောင်တသက်တကျွန်းကို ထောင်မှုးမမသီတာဆီမှာ သက်ညှာစွာ ကျခံစေ ဟီးး
စိတ်ကို အသေအခြာချယ်မှုန်းထားတာပဲ။ြွပ်ကြွပ်ရွရွလေးရေးထားပေမယ့် လေးတယ်။ Artistic, man.
Happy Birthdayဦးလေး လင်းထက်း) အမြဲတမ်းချစ်ချစ် နဲ့ သမီးလေးကို လွမ်းတယ်လို့ ပြောနေတဲ့ အစ်ကိုကြီး အလွမ်းတွေ အမြန်ပြေပျောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ဗျာ ။ မှတ်တိုင်က ၃၅ လား ၅၃ ထင်လို့ဟီးးးး
မှတ်တိုင် ၃၅ ဆိုတော့ ဆူးလေနဲ့ သာကေတ ပြေးတဲ့ကားလားလို့ ရုတ်တရက် ဖတ်ကြည့်လိုက်မှ အော့အော်ဖြစ်သွားတယ်။
မိုက်တယ် အိမ်မက်မဲ၂၁တော့ အရေးအသားတွေ တော်ပြီးရင်းတော်။ ဆက်သာချ။ :D
အရေးအသားရော အတွေးရော ကောင်းတယ်။ လူတိုင်းလူတိုင်း စိတ်အကျဉ်း လှောင်အိမ်မှ လွတ်မြောက်နိုင်ပြီး အခြားသူများကိုလဲ လွတ်မြောက်ရာသို့ တွဲခေါ်နိုင်ကြပါစေ။
ကိုလင်ထက် အတွက် ဆုတောင်းပေဒပါတယ် ဘ၀ပန်းတိုင်ကို သာသာယာယာနဲ့ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေလို့ ။ Happy Birthday!!
ကိုအိမ်မက်နက် စာအရေးအသားကောင်း၏။ အားပေးလျှက်။
Happiest Birthday Ko Lin Htet !
သိပ်ကောင်းတယ်ညီရေ.. တစ်ပုဒ်ထက် တစ်ပုဒ် ပိုပိုကောင်းလာတယ်။
Happy BD Ko Linn Htet! :)
ဘယ်သူ့ သားမက် ဘယ်သူ့ သမီး ဖြစ်ဖြစ် blog ကောင်းရင်ဖတ်မှာပဲ။
ဘယ်သူ့မွေးနေ့ ဖြစ်ဖြစ်ပါ ကြုံတာနဲ့ တခါတည်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းသွားပါတယ်။
ပျော်ရွှင် အောင်မြင် ပါစေ။
စိုးမြနန္ဒာသက်လွင်က ထောက်လှမ်းရေးက ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတယောက်ရဲ့သမီးဖြစ်...
မကြာသေးခင်ကမှ အင်္ဂလန်သံရုံးကနေ နှစ်ပြည့််သွားလို့ ပြည်တော်ပြန်ရမှာ မပြန်ပဲ အင်္ဂလန်မှာ Asylum seeker လုပ်သွားတဲ့ ရုံးအုပ်ရာထူးအဆင့်ရှိတဲ့ ဒေါ်နွယ်နီမိသားစုရဲ့ထွက်ဆိုချက် နဲ့တကွ (မင်းတို့ Brother အောင်လင်းထွဋ် လိုပေါ့ကွာ) မြန်မာပြည်မှရရှိထားတဲ့ မြင့်ဆွေမိသားစု (စိုးမြနန္ဒာသက်လွင်ပုံအပါအဝင်) အင်္ဂလန်သံအမတ် ဗိုလ်မှုးချုပ်နေဝင်းနဲ့သူ့မိန်းမ ဆို စိုးမြနန္ဒာသက်လွင်ကို ဖင်မနေရတဲ့ ဓါတ်ပုံများရော၊ မြန်မာသံရုံးကဟာတွေ သူဆီမှာ ထမင်းချက် ကျွန်ခံပေးရတဲ့ ဓါတ်ပုံများရော မကြာခင်သံရုံးမှ လုပ်မည့်ပွဲများတွင် သူတို့တွေ့ဆုံကြပြီး စီးဇိမ်ရစ်မူးပျော်ပါးကြမည့် အခါရိုက်မယ့် ဓါတ်ပုံများနှင့် ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများရော မင်းတို့လိုလူတွေထဲက အသားထဲကလောက်ထွက်ပြီးပေးထားတာ၊ ထပ်ပေးအုးံမှာ၊ ပေးတော့ဖော်တော့လဲယူရတာပေါ့ကွ..
အစ်ကိုရေဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းနဲ့တော့ထင်သား ကိုလင်းထက်အကြောင်းရေးထားတာလို့တော့။ နောက်ကျမှလာလို့ ခွင့်လွတ်စေချင်ပါတယ်။
မိုက်တယ် ။ ဆက်လုပ် ၊ စကားမစက် အဖြူရောင်နတ်သမီး တခုလောက်ကွာ အခု..လွင်.ချင်လို.
“အင်း… တကယ်တော့ ဘ၀ဆိုတာလဲ စီးကရက် တစ်လိပ်လိုပါပဲ…။ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ ဆိုတဲ့ မီးတွေနဲ့ လောင်မြိုက်ရင်း လောင်မြိုက်ရင်း နောက်ဆုံးတော့ ဖင်စီခံမှာ ကပ်ပြီးကျန်ခဲ့တဲ့ သောကတွေနဲ့ အဆုတ်ထဲကို ရောက်သွားတဲ့ အကုသိုလ်တွေပဲ ကျန်ခဲ့တယ်…။” ဆိုတာကို တော်တော်လေး သဘောကျမိပါတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ တော်တော်ကြာကြာရပ်ပြီး တွေးနေမိသေးတယ်။ blackdream ရေ အရေးအသားကတော့ အမြဲကောင်းနေတော့တာပါပဲ။
နအဖသားသမီး သမက် စစ်ခွေးတွေနဲ့ စစ်ခွေးအောက်ဆွဲ အလိုမရှိဗျို့ ဗိုလ်ချုပ်သားမက် နဲ့ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးသမီး လဲ လီးပဲ ပြည်သူနှိပ်စက် သံဃာသတ် ဒင်းတို့ကို တသက်မကျေဘူး ခြေမ မကောင်းခြေမ လက်မ မကောင်းလက်မပဲ ကျူပင်ခုတ်ကျူငုတ်တောင် မကျန်စေရဘူး.. မြန်မာပြည်က နအဖ ကြီးကြီး MASTER များနဲ့ပါတ်သတ်တဲ့ စိုးထက်ရော စိုးမြနန္ဒာသက်လွင်ရော ကိုဒီနေရာကနေ“လုံးဝရှုံ့ချပါတယ်”။
ဖတ်ရင်းနဲ့ နတ်သမီးကိုယ်ငွေ့ကို သတိရလိုက်တာ။ ကောင်းတယ်ဗျာ :)
သြော် ကိုလင်းထက်က ငါ့ထက် ကြီးသကိုး.... အသက်.... ပိုကြီးသော ကိုလင်းထက်အား ၇ိုသေလေးစားစွာဖြင့် ခေါ်လိုက်ပါမယ်။ ယောက္ခမကြီး... ဟီ...ဟိ
့အရမ်းရမ်းကိုမိုက်တယ်ဗျာ။အရေးအသားတွေကိုအရမ်းအားကျတယ်။ဦးလေး အတွက်ရေးပေးတဲ့အတွက် လည်း ဂုဏ်ယူပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းစာရေးစာဖတ်ဝါ သနာ ပါပါတယ်။ခက်တာ က မရေးတတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။နောင်လည်းမကြာခဏ လာလည်ပါ့မယ်။